Ukuphupha kwegumbi lokulinda Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Iphupha malunga neGumbi lokulinda
Uhlala kwigumbi lokulinda kude kube lithuba lakho lokuxoxa umba othile, umzekelo esibhedlele okanye phambi kwegunya. Kukwakho namagumbi kwizikhululo zikaloliwe ezinezihlalo apho unokulinda khona de uloliwe ahambe. Ngokwesiqhelo baninzi abantu abalinda kancinci okanye kancinci ukuba babizwe kungekudala. Ngamanye amaxesha kukho impikiswano malunga nomyalelo ochanekileyo. Nangona kunjalo, ukulinda okuqhelekileyo kunesiphumo sokudibanisa, ukuze ngamanye amaxesha ube nengxoxo engalindelekanga nabantu ongabaziyo.
Ukuhlala kwigumbi lokulinda ephupheni kunokubangela ukungabi namonde. Kodwa mhlawumbi kukwanomdla kakhulu ukuqaphela bonke abantu abohlukeneyo nabo balapho. Ukutolikwa kwamaphupha, iimvakalelo zomphuphi zibalulekile njengomxholo wephupha.
1 Uphawu lwephupha «igumbi lokulinda» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «igumbi lokulinda» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «igumbi lokulinda» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «igumbi lokulinda» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na ohlala kwigumbi lokulinda ephupheni ulungele ukuba nomonde kwaye alinde. Kutoliko jikelele lwamaphupha, umqondiso wephupha ukwazisa mpu melelo kwimimandla ebaluleke njengangoku ekuphupheni, ukuphuculwa kobungcali okanye ukuzaliseka kubudlelwane bothando. Ukuba uhlala uzolile, ekugqibeleni uza kufika apho, ngamanye amaxesha ukhawuleze kunokuba bekulindelwe.
Nangona kunjalo, umfanekiso wephupha unokuba ngumnxeba wokuba ungabe usalinda, kodwa ulinde. Inyathelo lokuqala usele. Ngokwengcaciso yohlalutyo lwamaphupha, igumbi lokulinda limele ulindelo lomntu oleleyo. Ujonge ukudibana nabanye abantu abaza kukuxhasa ekwenzeni iiprojekthi okanye bakuncede uthathe isigqibo. Nangona kunjalo, umphuphi kufuneka asebenze ngokwakhe.
Iimvakalelo ephupheni zibalulekile ekutolikweni kwephupha. Ukuba umntu olalayo ulinda ngomonde, uphawu lwephupha "igumbi lokulinda" luphawu lwe bulumko nokuqonda. Umntu ophuphayo uyazi ukuba akukho nto inokunyanzelwa. Ukuphelelwa ngumonde, kwelinye icala, kubonisa ulindelo olugqithisileyo umntu ophuphayo analo kuye okanye kwabanye.
Uphawu lwephupha "igumbi lokulinda" linokubhekisa kwi ukusika khomba ebomini. Iziganeko ezingalindelekanga zibangela utshintsho. Iphupha linokuxela ukuqala kwenqanaba lesigqibo ebomini.
Uphawu lwephupha «igumbi lokulinda» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokutsho kohlalutyo lwamaphupha, igumbi lokulinda lifanekisela a Ukuphazamiseka kwindlela yobomi. Ukuqala okanye ukuphela kwenkqubo kubonisiwe ephupheni kusetyenziswa uphawu lwephupha. Ukugula ngengqondo okanye ngokomzimba kunokuphononongwa yi-subconscious njengesikhululo segumbi lokulinda.
Ukuba umphuphi ukwigumbi lokulinda likagqirha, i-subconscious isebenzisa umfanekiso wephupha ukutsalela ingqalelo kwinto yokuba ufuna unyango lwengqondo okanye lomzimba. Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, iphupha likucela ukuba ufune uncedo kwigunya eliphezulu. Kuxhomekeka kubuntu nakwimeko yobomi, uphawu lwephupha "igumbi lokulinda" kufuneka libe yiyo Amandla okuziphilisa uvusa umphefumlo.
Ngokutsho kohlalutyo lwamaphupha, igumbi lokulinda lesikhululo sikaloliwe luphawu lwe Izicwangciso zobomi lomntu uphuphayo. Ngelixa usesichengeni sokushiya unxweme olutsha, tshintshiselana ngezimvo nabanye abahambi kwaye ngale ndlela uqokelele amava amatsha kunye nolwazi.
Ukongeza, uphawu lwephupha «igumbi lokulinda» liquka abasebenzi iipropati lowaphuphi. Kwiimeko zoxinzelelo okanye zongquzulwano, hlala uzolile kwaye ngomonde ufune isisombululo sengxaki. Umfanekiso wephupha unokutsalela ingqalelo kumntu onzima ojikeleze umntu oleleyo, ukuphathwa kwayo kufuna ibhalansi yangaphakathi.
Uphawu lwephupha «igumbi lokulinda» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lokuphupha "igumbi lokulinda" lisetyenziswa njenge isilumkiso Linda. Yonke into inomzuzu wayo kwaye umphuphi kufuneka ayilinde ukuba ifike. Kwangelo xesha, iinguqu zokulala sele zibhengeziwe.